Kormeerada Iyo Kala-gurista Mihnadlayaasha Caafimaadku Wadaan Ma Kala Kacsi Baa Mise Waa … ? – somalilandtoday.com
Kormeerada Iyo Kala-gurista Mihnadlayaasha Caafimaadku Wadaan Ma Kala Kacsi Baa Mise Waa … ?
Kormeer shaqo iyo kala shaadhayn lagu qaado cid shaqo ku guda jirtaa waxay bar bilow u tahay qorshe dejisan iyo hawl-qabad horey loo sii qaabeeyey oo ku qotoma qayd maamul iyo qaanuun sharci oo la aqbalay.
Qormadan waxay dabo joogtaa dhawaaqa maalmahan taagan ee mihnadlayaasha caafimaadku ku kala gurayaan aqoonta iyo xirfadlayaasha caafimaadka ee ajaanibta ah ee dalka ka shaqeeya, kuwaasi oo la qiimanayo inay yihiin dadkii saxda ahaa ee lagu aamini lahaa adeega caafimaadka bulshada.
Hadaba intaynaan qiimayn qofka ajaanibka ah, qiimeeyuhu ma yahay qofkii saxda ahaa ee wax qiimayan karayey? Isaga laftiisa ma la qiimeeyey? Ma haystaa agabkii/aqoontii uu ku qiyaasi lahaa
ama ku cabirilahaa waxa uu qiimaynayo ” Assessment tool” , su’ aalahan iyo kuwa kaleba waxay bud-dhig u yihiin in qorshahani iyo hawl- qabadkaniba uu noqon karo mid lagu kalsoonaan karo, islamarkaana muujinaya mid waadax ah oo fuliyaha iyo lagu fuliyahaba dhex iyo dhexaad u noqon kara.
Su’aalahan jawaabahooda rasmiga waxaan u dhaafaynaa cida awooda gacanta ugu jirto iyo dadweynaha, balse hadaynu is dul-taagno faaqidaad ahaan caafimaadka dadweynuhu waa qayb weyn oo nolosha dadku ay ku xidhan tahay, daryeelkiisa iyo dabogalka dadka gacanta ku hayaana waa halbowle loo baahan yahay in si joogta ah isha loogu hayo. Waxaana kale oo aan laga diimoonayan in kaabayaasha caafimaadka iyo adeegayaasha hada gacanta kula jiraaba ay jirto dayac iyo duruufo baahsan oo ooda jabsaday kuwaasi oo isu bedalay goobo gànacsi.
Dhibaatooyinka ugu badan ee haatan taagani waxa ugu weyn inaanay xiligan jirin xirfad iyo aqoon xadidan oo lagu ilaalinayo daryeelka nafta bini’aadamka, balse ay inta badan tahay xeelad lagu xoogsanayo, taasi oo lagu fasiri karo in dhakhaatiirta shaqaynaya intooda badan aan la hubin aqoonta ay ku shaqaynayaan ” Certified Doctor” kuwa gudaha iyo kuwa dibada; inaanay jirin sharci xakamayna ama xadidaya hanaanka shaqo ee uu ku hawlgalayo dhakhtarku ” Setting Policy”; inaanay jirin min-qiyaaskii iyo halbeegii lagu qeexi lahaa takhasuska ama aqoonta xirfadlaha iyo qalabka lagu shaqaynayo; inay weli curdin yihiin siyaasadii iyo xeerarkii maxaliga ahaa lagu dabogeli lahaa xirfadlayaasha iyo weliba inay weli qabyo tahay la xisaabtankii guud.
Hadaba hadaynu u soo noqono kormeerka mihnadlayaasha caafimaadka waxa xusid mudan in shaqooyinkii maanta loo qabanyo bulshada ay ku salaysan tahay xeelado farsamaysan oo baayac-mushtar oo ay meesha ka maqan tahay xirfadii iyo anshaxii caafimaad. Tusaal ahaan waxa jira in dhakhaatiir badan oo shaqaynaysa aanay maanta la xaqiijin aqoonta ay ku shaqaynayaan haday tahay mid daweeye (Doctors); mid baadhitaan (Labrotorist); mid dawada yaqaanba ( Pharmacologist) iyo qaybaha xirfadeed ee kale; inay jiraan xarumo caafimaad oo loo furtay inay lacag uun soo saaraan oo lagu hayato dhakhaatiir sheeganaya takhasusyo badan ama ka badan; in hab-raaca bukaanka loola dhaqmayaa ama loo geedi-galinayo bukaankiisa ay tahay hab lacag lagu abuurayo keliya halka la ixtiraami lahaa anshaxa caafimaadka iyo cilada bukaha. Kuwan iyo kuwa kaleba way shaqaynayaan, waxaanay haystaan intooda badani liisanka mihnadlayaasha caafimaadka.
Dhibaatooyinka kale waxa ka mida qaybaha daweynta dhaqanka iyo Cilaajyada oo iyaga sidan si la mida loogu shaqaysto; Xayeysiisyada ka soo butaacaya warbaahinta ee lagu xayeysiinayo dhakhtar, xarun caafimaad iyo weliba dawooyin gaara oo la fahmi karo hadafka loo xayeysiinaaa inay ganacsi tahay iyo weliba dhakhaatiirta da’yarta ee ka soo burqanaysa jaamacada gudaha iyo dibada ee aan tayada xambaarsanayn, kuwaasi oo dhamaantood ka mida halista aan ka werwerayno.
Hadaba, inta aan lagu boodin xaga qiimeynta iyo dabogalka ajaanibta waxaan laga maarmayn in xarumaha mihnadlayaasha iyo maamulka mihnadlayaashu ay sharci ahaan iyo aqoon ahaanba u dhisan yihiin kuwa shaqadan balaadhan gudan kara, taasi oo difaac u ah inaydaan xalilin dhibaato aad abuurteen sida liisan aad horey u bixisay, balse ay kuu dejisan yihiin shuruucdii iyo shardiyadii aad wax ku qiimeyn lahayd qorshe, qof iyo qalabba.Iyada oo qiimeynta iyo dabogalku ( M&E)- Monitoring and Evaluation uu daba soconayo qorshe cad oo hore loo jeexay oo ku sar-go’an shaqo, waqti iyo fuliye wada jaan-qaadaya. Hadii kale sheekadu waxay u dhadhamaysaa kala kacsi iyo dhacdadii Dr. Macow ee horey u dhacday!.
Qalinkii: Yuusuf Ibrahim Warsame- Yuusuf Ilka-case.